| आइफोनमा फेसबुक चलाउँदा यस्तो मज्जा !
आइफोनमा फेसबुक चलाउँदा यस्तो मज्जा !
मेचीकाली : 2014-01-31 17:23:50
लोकप्रिय सोसल नेटवर्किङ साइट फेसबुकले आफूलाई मोबाइलमा नयाँ स्वरुपमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ। मोबाइलबाट बढी भन्दा बढी प्रयोगकर्ता आउने र आधाभन्दा बढी विज्ञापनबाट हुने आय पनि मोबाइलबाटै पाउन थालेपछि फेसबुकले यस्तो निर्णय गरेको हो। फेसबुकका अनुसार ७८ प्रतिशत अमेरिकी प्रयोगकर्ता मोबाइलबाट फेसबुकमा आउने गर्छन्। यद्यपि वेबसाइटबाट हेर्दा र मोबाइल एपबाट हेर्दा फेसबुकमा खासै अन्तर अहिलेसम्म देखिँदैन। उस्तै न्युजफिड, उस्तै फोटो झण्डै उस्तै स्वरुप। अमेरिकी प्रयोगकर्ताले सोमबारदेखि भने यसमा क्रान्तिकारी परिवर्तन देख्न पाउनेछन्।
आइफोन प्रयोगकर्तालाई लक्षित गर्दै फेसबुकले पेपर नामको नयाँ एप सोमबारदेखि सुरु गर्ने भएको छ। जसरी पत्रिकाको पन्ना पल्टाउँदै सामाग्रीहरु हेरिन्छ, त्यसरी नै अब फेसबुकमा पाना पल्टाएर कसैले अपलोड गरेका फोटो, स्टायटस हेर्न सकिनेछ।
त्यसबाहेक यसमा अरु थुप्रै नयाँ विशेषता पनि थपिनेछन्। फेसबुकले दिएको जानकारी अनुसार पेपर एपबाट फेसबुक हेर्दा मोबाइलको स्क्रिनभर फोटो देखिनेछ। हाइ रेजोल्युसनका फोटोहरु मोबाइल दायाँबायाँ ढल्काएसँगै फोटोका कुना पनि प्रष्ट हुनेछन्। त्यस्तै विभिन्न विषयका छुट्टाछुट्टै श्रेणीहरुबाट आफूलाई रुचि लागेका विषयमा पढ्न पाइनेछ। ती श्रेणीहरुमध्येबाट आफूलाई मन लागेका श्रेणी छानेर एउटा आफ्नो छुट्टै पेपर बनाउन सकिनेछ। यी श्रेणी फेसबुकको न्युजफिडभन्दा बाहिर पनि हुनसक्छन्। आइओएस र एन्ड्रोइडमा लोकप्रिय क्युरेटर एप फ्लिपबोर्ड जस्तै हुनेछ फेसबुकको नयाँ एप।
फेसबुकले यो एप सबैभन्दा पहिला अमेरिकामा आइफोन प्रयोगकर्ताका लागि फेब्रुअरी ३ देखि ल्याउनेछ। अरु प्लेटफर्मका लागि कहिलेसम्म यो एप उपलब्ध हुने भन्ने बारे कम्पनीले केही बताइसकेको छैन।